Wholesale GQ-KG (L) / 01/02 Cable Grouting Agent fekitori uye vagadziri | Gaoqiang
GQ-KG t inoumbwa neyekuwedzera michina yekuwedzera zvinhu, yakakwira kuita mvura yekudzora, dzakasiyana siyana zvisina kujairika uye zvakasikwa polymer zvinhu pamwe neIP, 42.5 simenti. Yakanaka fluidity, yakatsiga slurry, yakanaka yekuzadza degree, hapana shrinkage, kuwedzera kushoma, hapana zvinokuvadza zvinhu kune iyo yekusimbisa. Icho chiri grouting zvinhu zve post-tensioned pre - kushushikana nzira, majoini uye majoini enhengo dzekongiri. Iyo mhando yechigadzirwa inosangana nezvinodiwa zveTB / T3192-2008, JTG / TF 50-2011 uye mamwe maitiro.
1.With yakanakisa fluidity uye shoma kurasikirwa kwenguva, nyore kudzvanya pulp kushanda
2.Iyo yekuvandudza mhedzisiro iri pachena. Iyo pasita ine yakasimba simba (> 50MPa) uye yakanaka kunamatira mushure mekuomesa
3.No shrinkage kana kuwedzera mushure mekudonhorera, kugadzikana kwakanaka kwevhoriyamu
4.Iyo slurry haina kubuda ropa, inogona kuchengetedza nguva yakareba yekushanda, iyo slurry yekuzadza degree yakanaka
1.All marudzi ese enjanji uye mugwagwa mukuru post - tensioning zambuko tanera grouting
2.Tunnel grouting yeakakura prestressed zvivakwa
3.Gehena grouting yenyukireya magetsi chirimwa
4.Stop leakage grouting pazvibatanidzwa zvezvakasiyana kongiri zvivakwa
1.Control mvura-simende reshiyo KG (L) 01≤0.33, KG (L) 02≤0.28 yakatemwa nemuedzo usati washandiswa
2.Kuenderana neiyo yakatarwa musanganiswa muyero wekusanganisa, kusanganisa nguva haisi pasi pe4 ~ 5 maminetsi, inofanirwa kunge iri maererano nezvinodiwa zvekumutsa, ichiwedzera mvura kushandisa nzira mbiri
3.Iyo grouting pombi inofanira kucheneswa pamberi pamberi grouting. Iyo slurry inofanirwa kuenderera ichikurudzirwa kuchengetedza kuenzana uye kuyerera kweslurry. Iyo slurry inofanira kuzadzwa mukati memaminitsi makumi matatu
4.Piston kumanikidza pombi inofanira kushandiswa kune grouting, uye iyo grouting kumanikidza hakufanirwe kuve kwakakura kupfuura 0.6mpa
5.Mhando dzakasiyana dzesimende kubva kunzvimbo dzakasiyana dzinogadzira dzine hunyanzvi pane mashandisirwo emugadziri we grouting. Izvo zvinokurudzirwa kuti yakanakisa yekusanganisa huwandu hwesamende mhando uye grouting mumiriri inofanirwa kutemerwa nemuyedzo usati washandiswa. Edza kusarudza mhando dzesimende nekugona kwakanaka, kuderera uye simba rakakwira
Pasuru & Kuchengeta
Ichi chigadzirwa ipfu, chakazara mumapurasitiki akarukwa mabhegi akarongedzwa nepurasitiki firimu, 40kg / bhegi kana 50kg / bhegi
Inodzivisa kunaya, unyoro uye kukuvara, inoshanda kwehafu yegore. Izvo zvisingatsve uye zvinoputika zvigadzirwa zvinofanirwa kuchengetwa nemazvo
Pashure: GQ-208 Makemikari Antifreeze Mumiriri